ထိုနတ်ဆိုးများ၏သခင် — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အာရုန်သည်ညရော်ဘင်ဆင် • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 8:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တစ်ဦးဒက်ထရွိုက်လူငယ်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ခြင်း, နှင့်မြို့ပြဧဝံဂေလိဆရာ, သငျသညျအကြှနျုပျ၏ထိပ်၌ဖြစ်ရပြီ3သင့်ရဲ့ပွဲဦးထွက်ကတည်းကအနုပညာရှင်စာရင်း. သို့သော်ဤဝေးအနုပညာရှင်တစ်ဦးထက်ကျော်လွန်သင်တို့အဘို့လေးစားမှုငါ၏အဘားပေါ်ပေါက်စောင့်ကြည့်. အမှန်ဆိုသည်ကား,, သငျသညျဝငျကမျြးတစ်န်ကြီးများမှာ!
ဟောပြောခြင်းသိမ်းဆည်းထားပါ & ရောက်ရှိ!
စန္ဒီ Staley • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစ်ကို, ကိုယ့်ငါထာဝရဘုရားသည်၌သင်တို့ကိုချစ်သငျသညျပွောပွနိုငျ? ကိုယ့်သင့်ရဲ့သီချင်းတင့်တယ်သောဘဝတစ် link ကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. ဒီညကိုကြား, LifeNews.com အပေါ်ရိုင်ယန် Bomberger အားဖြင့် posted, သင်တို့ကိုငါသုံးပြီးထာဝရဘုရားကကြည့်ဖို့ဒါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်! သူသည်သင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်း (နှင့်သင့်အသစ်များကိုမိသားစု!) ဖောဖောသီသီသငျသညျသူရှာ and save ဆီသို့ရောက် လာ. , သူတို့အားဝန်ကြီးဆက်လက်အဖြစ်.
ကက်သရင်း Kuykendall • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Rikki Lewis က • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
dave.scik • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Deep ၌ကြီးသောကို amma တူး
jtm • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်